Oovimba bokhula Oovimba-US Ilungelo Lokwazi
Ibhanti ka-Bayer yokuhlawula amabango e-US Roundup enza inkqubela phambili
ezaposwa ngomhla Disemba 1, 2020 by UCarey Gillam
Umnini weMonsanto uBayer AG wenza inkqubela phambili ekusombululeni amatyala angamawakawaka aseMelika aziswe ngabantu betyhola bona okanye abathandekayo babo ukuba babe nomhlaza emva kokubhencwa kwimichiza yokubulala ukhula iMonsanto's Roundup.
Imbalelwano yamva nje evela kubameli babamangali iye kubathengi babo igxininise inkqubela phambili, eqinisekisa ipesenti enkulu yabamangali abakhetha ukuthatha inxaxheba ekuhlaleni, ngaphandle kwezikhalazo zabamangali abaninzi abajamelene nezindululo zokuhlawula ezincinci.
Ngokwezinye izibalo, isixa semali esihlawulelwayo siya kushiya intlawulo encinci, mhlawumbi amawaka ambalwa eedola, kubamangali ngabanye emva kokuba kuhlawulwe imirhumo yamagqwetha kwaye iindleko ezithile zonyango ezihlawulelwayo zihlawulwa.
Nangona kunjalo, ngokwencwadi eyathunyelwa kubamangali ngasekupheleni kuka-Novemba ngomnye weefemu zomthetho ezikhokelayo, ngaphezulu kweepesenti ezingama-95 "zababango abafanelekileyo" bagqibe ekubeni bathathe inxaxheba kwisicwangciso sokuhlala ekuxoxiswene ngaso nenkampani neBayer. Ngoku "imbawula yokuhlala" ineentsuku ezingama-30 zokuphonononga amatyala nokuqinisekisa ukufaneleka kwabamangali ukufumana inkxaso-mali yokuhlawula ityala, ngokwembalelwano.
Abantu banokukhetha ukuphuma ekuhlaleni kwaye bathathe amabango abo baye kulamlo, kulandele ukuzibophelela kulamlo ukuba banqwenela okanye bazame ukufumana igqwetha elitsha elizokusa ityala labo enkundleni. Abo bamangali banokuba nexesha elinzima lokufumana igqwetha eliza kubanceda bathathe ityala labo balise enkundleni kuba amafemu ezomthetho avumelana nokuhlala neBayer avumile ukungazami amanye amatyala okanye ukunceda kulingo oluzayo.
Ummangali omnye, ocele ukungachazwa ngegama ngenxa yemfihlo yenkqubo yentlawulo, uthe uyaphuma kwesi sihlalo ngethemba lokufumana imali ethe kratya ngokulamla okanye kwityala elizayo. Uthe ufuna uvavanyo oluqhubekekayo kunye nonyango lomhlaza wakhe kwaye indawo yokuhlala ecetywayo ayizukumshiya nento yokuhlawulela iindleko eziqhubekayo.
"IBayer ifuna ukukhululwa ngokuhlawula imali encinci kangangoko ngaphandle kokuya enkundleni," utshilo.
Uqikelelo olubi kumndilili wokuhlawulwa kwemali kummangali malunga ne- $ 165,000, amagqwetha kunye nabamangali ababandakanyekayo kwiingxoxo bathe. Kodwa abanye abamangali banokufumana ngaphezulu kakhulu, kwaye abanye bafumane okungaphantsi, kuxhomekeke kwiinkcukacha zetyala labo. Zininzi iindlela zokumisela ukuba ngubani onokuthatha inxaxheba kwintlawulo kunye nokuba ingakanani imali anokuyifumana loo mntu.
Ukuze afaneleke, umsebenzisi we-Roundup kufuneka abe ngummi wase-US, kwaye afunyaniswe ukuba une-non-Hodgkin lymphoma (NHL), kwaye ebenokubonakaliswa kwi-Roundup okungenani unyaka omnye ngaphambi kokuba afunyaniswe ene-NHL.
Isivumelwano sokuhlawula kunye neBayer siyakugqitywa xa umlawuli eqinisekisa ukuba ngaphezulu kweepesenti ezingama-93 zamabango afanelekileyo, ngokwemiqathango yesivumelwano.
Ukuba umlawuli wentlawulo ufumanisa ukuba ummangali akafaneleki, loo mmangali uneentsuku ezingama-30 zokubhena kwisigqibo.
Kwabamangali ababonwa befanelekile umlawuli wolungiso uya kunikezela ityala ngalinye inani lamanqaku ngokusekwe kwiikhrayitheriya ezithile. Inani lemali lommangali ngamnye alifumanayo lisekwe kwinani lamanqaku abaliwe kwimeko yabo nganye.
Amanqaku esiseko asekwa kusetyenziswa ubudala bomntu ngelo xesha afunyaniswa ene-NHL kunye nenqanaba lobunzima "bokwenzakala" njengoko kumiselwe kwinqanaba lonyango kunye nesiphumo. Amanqanaba abaleka 1-5. Umntu osweleke kwi-NHL wabelwe amanqaku esiseko kwinqanaba lesi-5, umzekelo. Amanqaku angaphezulu anikwa abantu abancinci abaye bafumana imijikelo yonyango kunye / okanye bafa.
Ukongeza kumanqaku esiseko, uhlengahlengiso luyavunyelwa olunika amanqaku ngakumbi kubamangali ababekhe babhencwa ngakumbi kwiRoundup. Kukho izibonelelo zamanqaku angakumbi kwiindidi ezithile ze-NHL. Abamangali bafunyaniswe benohlobo lwe-NHL ebizwa ngokuba yiPrimary Central Nervous System (CNS) i-lymphoma ifumana i-10 yepesenti yokunyusa amanqaku abo, umzekelo.
Abantu banokuba namanqaku ancitshisiweyo ngokusekwe kwizinto ezithile. Nayi imizekelo embalwa evela kumanqaku e-matrix amiselwe ukumangalelwa ngeRoundup:
Ukuba umsebenzisi wemveliso yeRoundup wasweleka phambi kukaJanuwari 1, 2009, amanqaku apheleleyo ebango aziswe egameni lawo aya kuncitshiswa ngama-50 epesenti.
Ukuba ummangali ongasekhoyo wayengenalo iqabane okanye abantwana abancinci ngexesha lokusweleka kwabo kunokuthathwa iipesenti ezingama-20.
Ukuba ummangali wayenayo nayiphi na imihlaza yegazi ngaphambi kokusebenzisa i-Roundup amanqaku abo anqunyulwa ngeepesenti ezingama-30.
Ukuba ixesha lexesha phakathi kokuvezwa kwe-Roundup yebango kunye nokuchongwa kwe-NHL yayingaphantsi kweminyaka emibini amanqaku anqunyulwe iipesenti ezingama-20.
Ingxowa mali yokuhlala kufuneka iqale ukungena kubathathi-nxaxheba entwasahlobo kunye neentlawulo zokugqibela ezinethemba lokuba zenziwe ngehlobo, ngokutsho kwamagqwetha abandakanyekayo.
Abamangali banokufaka izicelo zokuba babe yinxalenye "yengxowa-mali yokulimala engaqhelekanga," isetelwe iqela elincinci labamangali abanengxaki yokulimala okunxulumene ne-NHL. Ibango linokufanelekela kwingxowa-mali yokulimala engaqhelekanga ukuba ukubhubha komntu kwi-NHL kufike emva kweekhosi ezintathu okanye nangaphezulu ezigcweleyo zonyango kunye nezinye iindlela zonyango.
Ukusukela ukuthenga iMonsanto kwi-2018, iBayer ibisokola ukufumana indlela yokuphelisa isimangalo esibandakanya ngaphezulu kwe-100,000 yabamangali eMelika. Inkampani ilahlekelwe zizo zontathu izilingo ezibanjiweyo ukuza kuthi ga ngoku kwaye ilahlekile kwimijikelo yokuqala yezibheno ezifuna ukuguqula ilahleko zetyala. Amajoni kuvavanyo ngalunye kuvavanyo lwafumanisa ukuba lweMonsanto I-glyphosate-based herbicides, ezinje ngeRoundup, zibangela umhlaza kwaye iMonsanto ichithe amashumi eminyaka ifihla umngcipheko.
Amabhaso ejaji afikelele ngaphaya kwe- $ 2 yezigidigidi, nangona izigwebo ziye zayalelwa ukuba zincitshiswe lityala kunye nezibheno zenkundla.
Iinzame zenkampani zokusombulula isimangalo ziye zacaciswa ngokuyinxalenye ngumceli mngeni wendlela yokuphelisa amabango anokuziswa kwikamva ngabantu abaphuhlisa umhlaza emva kokusebenzisa iyeza lenkampani.
Izibheno zovavanyo ziyaqhubeka
Nangona iBayer ijolise ekupheliseni izilingo ezizayo ngokuhlawula iidola, inkampani iyaqhubeka nokuzama ukuguqula iziphumo zezilingo ezintathu ezilahlekileyo inkampani.
Kwilahleko yokuqala yetyala- Ityala likaJohnson v. Monsanto -U-Bayer waphulukana nemizamo yokuguqula i-jury efumanisa ukuba iMonsanto yayinoxanduva lomhlaza kaJohnson kwinqanaba lenkundla yezibheno, kwaye ngo-Okthobha, iNkundla ePhakamileyo yaseCalifornia ale ukujonga kwakhona kwimeko.
I-Bayer ngoku ineentsuku ezili-150 ukusuka kweso sigqibo sokucela ukuba umcimbi uhanjiswe yiNkundla ePhakamileyo yase-US. Inkampani ayisenzi sigqibo sokugqibela malunga neli nyathelo, ngokutsho kwesithethi seBayer, kodwa ibonakalisile ngaphambili ukuba inenjongo yokuthatha amanyathelo.
Ukuba iBayer yenza isicelo kwiNkundla ePhakamileyo yase-US, amagqwetha kaJohnson kulindeleke ukuba afake isibheno esinemiqathango ecela inkundla ukuba ihlolisise amanyathelo okugweba awanciphise ibhaso likaJohnson ukusuka kwi-289 yezigidi ukuya kwi-20.5 yezigidi.
Amanye amatyala enkundla yaseBayer / Monsanto
Ukongeza kumatyala eBayer ajongene nembambano yomhlaza wase-Monsanto's Roundup, inkampani iyasokola noxanduva lweMonsanto kwityala lokungcoliseka kwe-PCB nakwizityholo zomonakalo wesityalo obangelwe yinkqubo yezityalo esekwe kwiMicanto ye-dicamba.
Ijaji yomdibaniso eLos Angeles kwiveki ephelileyo wasikhaba isicelo nguBayer ukuhlawula i-648 yezigidi zeedola ukulungisa ityala elithathwa ngabafaki-zicelo betyhola ukungcoliseka kwii-biphenyls ezine-polychlorine, okanye ii-PCB, ezenziwe yiMonsanto.
Kwiveki ephelileyo, ijaji yetyala kwityala lika Iifama zeBader, Inc. v. Monsanto yalahla izindululo zikaBayer kwetyala elitsha. Ijaji inqumle umonakalo owohlwaywa yijaji, nangona kunjalo, ukusuka kwi-250 yezigidi ukuya kwi-60 yezigidi zeedola, ishiya umonakalo ongahlawulwanga we-15 yezigidi, ngebhaso elipheleleyo le- $ 75 yezigidi.
Amaxwebhu afunyenweyo ngokufumanisa kwimeko ye-Bader ityhile ukuba iMonsanto kunye ne-BASF enkulu yeekhemikhali bebeyazi iminyaka ukuba izicwangciso zabo zokwazisa ngedicamba herbicide esekwe kwimbewu kunye nenkqubo yemichiza inokukhokelela kumonakalo kwiifama ezininzi zaseMelika.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker izibheno, IBaum Hedlund Aristei kunye neGoldman, Bayer, umhlaza, inkundla, EPA, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, jury, IMonsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, inambuzane, Ranger Pro, Yisonge yonke, inzululwazi, kwinkundla ephezulu, Ifemi yeMiller, trial, sinqumo, ababulali bokhula
Izifundo ezitsha zokubulala ukhula ziphakamisa inkxalabo kwimpilo yokuzala
ezaposwa ngomhla Agasti 12, 2020 by UCarey Gillam
Njengoko iBayer AG ifuna ukuphungula inkxalabo yokuba i-Monsanto's glyphosate-based herbicides ibangela umhlaza, izifundo ezininzi ezitsha ziphakamisa imibuzo malunga nefuthe elinokubakho lwekhemikhali kwimpilo yokuzala.
Uluhlu lwezifundo zezilwanyana ezikhutshiweyo ehlotyeni zibonisa ukuba ukubonakaliswa kwe-glyphosate kunefuthe kumalungu okuzala kwaye kunokusongela ukuzala, kongeza ubungqina obutsha bokuba iarhente yokubulala ukhula inokuba ukuphazamisa i-endocrine. Ukuphazamiseka kwemichiza kwe-Endocrine kunokulinganisa okanye kuphazamise iihomoni zomzimba kwaye kunxulunyaniswa nengxaki zokukhula kunye nokuzala kunye nengqondo kunye nokungasebenzi komzimba.
Kwi iphepha elipapashwe kwinyanga ephelileyo in I-Endocrinology yeMelecular and Cellular, Abaphandi abane baseArgentina bathi izifundo ziphikisana nesiqinisekiso yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo yase-US (i-EPA) yokuba i-glyphosate ikhuselekile.
Uphando olutsha luza njengoko iBayer injalo ukuzama ukuhlala ngaphezulu kwamabango e-100,000 aziswe e-United States ngabantu abathi batyhileka kwi-Roundup yeMonsanto kunye nezinye iimveliso ze-glyphosate-based based herbicide ezibangele ukuba bakhulise i-non-Hodgkin lymphoma. Abamangali kwizimangalo zelizwe lonke bathi iMonsanto kudala ifuna ukufihla umngcipheko weyeza layo.
I-Bayer izuze njengelifa ityala le-Roundup xa wathenga iMonsanto Ngo-2018, kungekudala phambi kokuphumelela kwamatyala amathathu kwabamangali.
Izifundo ziye zeza njengamaqela abathengi esebenzela ukuqonda ngcono indlela yokunciphisa ukubonakaliswa kwabo kwi-glyphosate ngokutya. Isifundo ipapashwe nge-11 ka-Agasti ifumanise ukuba emva kokutshintshela kukutya okune-organic kwiintsuku nje ezimbalwa, abantu banokusika amanqanaba e-glyphosate afunyenwe kumchamo wabo ngaphezulu kwepesenti ze-70. Ngokukodwa, abaphandi bafumanise ukuba abantwana abakwisifundo banamanqanaba aphezulu kakhulu e-glyphosate kumchamo wabo kunabantu abadala. Bobabini abantu abadala kunye nabantwana babone amathontsi amakhulu phambi kwesiyobisi sokubulala izitshabalalisi kulandela ukutshintsha kokutya.
IGlyphosate, eyona nto isebenzayo kwiRoundup, sesona sibulali sokhula sisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. IMonsanto yazisa izityalo ezinyamezelayo nge-glyphosate kwii-1990s ukukhuthaza amafama ukuba afafaze i-glyphosate ngqo kuwo onke amasimi ezityalo, abulale ukhula kodwa hayi izityalo eziguqulweyo. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwe-glyphosate, ngamafama kunye nabanini bamakhaya, izixhobo kunye nezinto zikarhulumente, kuye kwatsala inkxalabo ekhulayo kule minyaka ngenxa yokuxhaphaka kwayo kunye noloyiko malunga nokuba inokwenza ntoni na kwimpilo yabantu kunye nokusingqongileyo. Imichiza ngoku ifunyanwa ngokutya nakumanzi kunye nomchamo womntu.
Ngokwenzululwazi yaseArgentina, ezinye zeempembelelo zeglyphosate ezibonwe kwizifundo ezitsha zezilwanyana zibangelwa kukuvezwa kweedosi eziphezulu; kodwa kukho ubungqina obutsha obubonisa ukuba nokuba sesichengeni sokweedosi esezantsi kunokutshintsha ukukhula kwendlela yokuzala kwabasetyhini, neziphumo ekuchumeni. Xa izilwanyana zichanekile kwi-glyphosate ngaphambi kokufikisa, utshintsho lubonakala kuphuhliso kunye nokwahlulahlula ii-ovari follicles kunye nesibeleko, zitsho izazinzulu. Ukongeza, ukubonakaliswa kwemichiza yokubulala ukhula eyenziwe ngeglyphosate ngexesha lokukhulelwa kunokutshintsha ukukhula kwembewu. Konke kudibanisa ukubonisa ukuba i-glyphosate kunye ne-glyphosate-based herbicides ziziphazamiso ze-endocrine, baphetha abaphandi.
Usosayensi wezolimo uDon Huber, uprofesa osuka kwiYunivesithi yasePurdue, uthe uphando olutsha lwandisa ulwazi malunga nobungakanani bomonakalo onxulunyaniswa ne-glyphosate kunye ne-glyphosate-based herbicides kwaye inikezela "ukuqonda okungcono kobuzaza bokubhengeza okuxhaphakileyo inkcubeko ngoku. ”
UHuber uxwayise iminyaka ukuba iMonsanto's Roundup inokuba negalelo kwiingxaki zokuzala kwimfuyo.
inye isifundo esibalulekileyo yapapashwa kwi-Intanethi ngoJulayi kwiphephancwadi Ukutya kunye neTyxicology, ezimisele ukuba i-glyphosate okanye i-glyphosate-based herbicides iphazamise "i-hormonal ebalulekileyo kunye neethagethi zesibeleko seemolekyuli" kwiigundane ezikhulelweyo.
Isifundo esahlukileyo kutshanje papashwe kwincwadi I-Toxicology ne-Applied Pharmacology ngabaphandi abavela kwiYunivesithi yase-Iowa State bajonge ukubonakaliswa kwe-glyphosate kwiimpuku. Abaphandi bagqiba kwelokuba ukubonakaliswa okungapheliyo kwinqanaba eliphantsi kwi-glyphosate "kuguqula iproteome ye-ovari" (iseti yeeprotein ezivakalisiweyo kuhlobo oluthile lweseli okanye komzimba) kwaye "inokuba nefuthe ekusebenzeni kwe-ovari. Kwiphepha elinxulumene nelaba baphandi babini baseIowa State kunye nombhali omnye owongezelelweyo, papashwa ngo Inzala yetyhefu, Abaphandi bathi abafumananga ukuphazamiseka kwe-endocrine kwiimpuku ezivezwe kwi-glyphosate, nangona kunjalo.
Abaphandi abavela kwiDyunivesithi yaseGeorgia kuchazwe kwiphephancwadi Inzululwazi yezilwanyana kunye neNzululwazi yezilwanyana Ukusetyenziswa kwemfuyo yengqolowa edityaniswe nentsalela ye-glyphosate kubonakala ngathi inokwenzakalisa izilwanyana, ngokujonga izifundo kwesihloko. Ngokusekwe kuphononongo loncwadi, i-glyphosate-based herbicides ibonakala ngathi "yityhefu yokuzala, ineziphumo ezahlukeneyo kwiinkqubo zokuzala zamadoda nabasetyhini," utshilo umphandi.
Iziphumo ezothusayo zazikhona ikwabonwa nasezimvini. Uphando lupapashwe kwiphephancwadi Ungcoliseko lwendalo kujonge iimpembelelo zokuvezwa kwe-glyphosate kuphuhliso lwesibeleko kwiimvana zabasetyhini. Bafumene utshintsho abathi lunokuchaphazela impilo yokuzala kwabasetyhini yeegusha kwaye babonise i-glyphosate-based herbicides esebenza njengophazamisayo kwi-endocrine.
Ikwapapashwe kwakhona kwi Ungcoliseko lwendalo, izazinzulu ezivela eFinland naseSpain zithe kwi iphepha elitsha Ukuba benze uvavanyo lokuqala lwexesha elide lweziphumo ze- "sub-toxic" glyphosate exposure kwiinkukhu. Bazama ukuvavanya izagwityi zabasetyhini nezamadoda kwii-glyphosate-based herbicides ukusuka kwiintsuku ezili-10 ukuya kwiiveki ezingama-52.
Abaphandi bagqiba kwelokuba i-glyphosate herbicides "inokuguqula iindlela eziphambili zomzimba, inqanaba le-antioxidant, i-testosterone, kunye ne-microbiome" kodwa khange bafumane ziphumo zokuzala. Bathe iimpembelelo zeglyphosate azinakuhlala zibonwa “ngokwesiko, ngakumbi ixesha elifutshane, uvavanyo lwetyhefu, kwaye olo vavanyo alunakho ukububeka ngokupheleleyo ubungozi…”
IGlyphosate kunye neNeonicotinoids
Enye ye ezona zifundo zintsha Ukujonga iimpembelelo ze-glyphosate kwimpilo kwapapashwa kule nyanga kwi Ijenali yaMazwe ngaMazwe yoPhando lwezeNdalo kunye neMpilo yoLuntu. Abaphandi bagqiba kwelokuba i-glyphosate kunye ne-insectides ye-thiacloprid kunye ne-imidacloprid, zazinokubangela ukuphazamiseka kwe-endocrine.
Amayeza okubulala izinambuzane ayinxalenye yekhemikhali ye-neonicotinoid kwaye aphakathi kwezona zisetyenziselwa ukubulala izinambuzane ehlabathini.
Abaphandi bathi babeke iliso kwimpembelelo ye-glyphosate kunye neonicotinoids ezimbini kwiithagethi ezibalulekileyo zenkqubo ye-endocrine: I-Aromatase, i-enzyme ejongene ne-estrogen biosynthesis, kunye ne-estrogen receptor alpha, eyona proteni iphambili ekhuthaza umqondiso we-estrogen.
Iziphumo zabo zaxutywa. Abaphandi bathi ngokubhekisele kwi-glyphosate, umbulali wokhula uthintele umsebenzi we-aromatase kodwa isithintelo "besingabalulekanga kwaye sibuthathaka." Ngokubalulekileyo abaphandi bathi i-glyphosate ayikhange ibangele misebenzi ye-estrogenic. Iziphumo "bezingqinelani" nenkqubo yovavanyo eqhutywa yi-Arhente yoKhuseleko lwezeNdalo e-US, egqibe kwelokuba "abukho ubungqina obukholisayo bokunxibelelana okunokubakho kwindlela ye-estrogen ye-glyphosate," batsho.
Abaphandi bawubonile umsebenzi we-estrogenic kunye ne-imidacloprid kunye ne-thiacloprid, kodwa kugxininiso oluphezulu kunamanqanaba okubulala izitshabalalisi alinganiswe kwiisampulu zebhayiloji yomntu. Abaphandi bagqibe kwelokuba “amayeza aphantsi ezi zinambuzane akufuneki athathwe njengangenabungozi,” kodwa, kuba ezi zinambuzane, kunye nezinye ezonakalisa imichiza ye-endocrine, “zinokubangela iziphumo ze-estrogenic.”
Iziphumo ezahluka-hlukeneyo ziza njengoko amazwe amaninzi kunye neendawo kwihlabathi liphela kuvavanya ukuba okanye akunciphisi okanye kuthintelwe ukusetyenziswa okuqhubekayo kwe-glyphosate herbicides.
Inkundla yezibheno yaseCalifornia Ulawule kwinyanga ephelileyo ukuba bekukho ubungqina "obuninzi" bokuba i-glyphosate, kunye nezinye izithako kwiimveliso zeRoundup, zabangela umhlaza.
Ukutya kwengqondo izilwanyana, iintsana, Bayer, umhlaza, abantwana, indawo, zolimo, ukuzala, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, zonyango, IMonsanto, inambuzane, ukukhulelwa, ukuvelisa, Yisonge yonke, inzululwazi, ababulali bokhula
Amaqela ama-Big Ag athi inkundla ayinakuxelela i-EPA ukuba iyayivala nini i-dicamba
ezaposwa ngomhla Juni 17, 2020 by UCarey Gillam
Esona sigebenga sikhulu sika-Big Ag sixelele inkundla yomanyano ukuba mayingazami ukuyekisa amafama omqhaphu e-GMO kunye nabalimi beembotyi zesoya ekusebenziseni ababulali bokhula lwe-dicamba ngokungekho mthethweni ukuphela kukaJulayi, ngaphandle komyalelo wenkundla ekuqaleni kwale nyanga wokuvalwa kwangoko.
Imibutho yesithandathu yezorhwebo yesizwe, yonke inamaqhina emali emide eMonsanto kunye nezinye iinkampani ezithengisa iimveliso ze-dicamba ekubhekiswa kuzo, zifake isikhalazo ngolwe-Lwesithathu kwiNkundla yezibheno yase-US kwiSekethe yesithoba icela inkundla ukuba ingazami ukuphazamisa. ngesibhengezo se-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (EPA) sokuba amafama angaqhubeka nokusebenzisa iimveliso ze-dicamba nge-31 kaJulayi.
Baye bacela inkundla ukuba ingayibambi indelelo i-EPA njengoko kuceliwe ngamaqela aphumelele Nge-3 kaJuni umyalelo wenkundla ukukhupha isibhengezo.
"Abalimi beembotyi zesoya kunye nabomqhaphu baseMelika bangabeka emngciphekweni omkhulu xa bengathintelwa ekusebenziseni iiMveliso zeDicamba ngeli xesha lokukhula," itshilo ingxelo emfutshane efayilishwe yiAmerican Farm Bureau Federation, American Soybean Association, National Cotton Council of America, National Association of Wheat Growers, National Umbutho wabaLimi boMbona, kunye nabavelisi beSorghum baSizwe.
Ngokwahlukeneyo, i-CropLife America, i-lobbyist enefuthe kwishishini lezolimo, wafaka ingxelo emfutshane isithi ifuna ukunika "Iinkcukacha eziLuncedo kwiNkundla." UCropLife uxele kwifayile ukuba inkundla ayinalo igunya malunga nendlela i-EPA eqhubeka ngayo ukurhoxisa ukusetyenziswa kweemveliso zokubulala izitshabalalisi ezifana nababulali bokhula lwe-dicamba.
Iintshukumo kodwa zezakutshanje kumnyhadala omangalisayo weziganeko ezilandele isigwebo seSithoba seSekethe, efumanise ukuba i-EPA yaphule umthetho xa ivuma iimveliso zedicamba eziphuhliswe yiMonsanto - ephethwe yiBayer AG, kunye neemveliso ezithengiswa yiBASF, kunye UDuPont, ophethwe nguCorteva Inc.
Inkundla iyalele ukuvalwa kwangoko kokusetyenziswa kwemveliso nganye yeenkampani, ifumanisa ukuba i-EPA "ibubeka esichengeni kakhulu ubungozi" beemveliso eziya kumafama alima ezinye izityalo ngaphandle komqhaphu kunye ne-soy.
I-EPA ibonakala ngathi iyayilahla iodolo, nangona kunjalo, xa uxelele abalimi bekotoni kunye ne soy Banokuqhubeka nokutshiza iyeza lokubulala ukhula elichaphazelekayo ngoJulayi 31.
IZiko loKhuseleko loKutya (i-CFS) kunye namanye amaqela athe athatha i-EPA enkundleni malunga nalo mbandela abuyela kwinkundla kwiveki ephelileyo, efuna ukuba isekethe ye-9 bamba i-EPA ngendelelo. Inkundla ngoku ithathela ingqalelo eso siphakamiso.
"I-EPA kunye neenkampani zezibulali zinambuzane zizamile ukudida umba kwaye zizama ukoyikisa iNkundla," utshilo uGeorge Kimbrell, umlawuli wezomthetho weCFS kunye nommeli wabakhalazi. "Inkundla ibambe ukuba imveliso isebenzisa ukungekho mthethweni kwaye ubuqhetseba be-EPA abunakukutshintsha oko."
Umyalelo wokuthintela iimveliso ze-dicamba zenkampani ubangele isiphithiphithi kwilizwe lasefama kuba abalimi abaninzi beembotyi zesoya kunye nomqhaphu batyale izigidi zeehektare zezityalo ezinyamezelayo zemfuza ezenziwa nguMonsanto ngenjongo yokunyanga ukhula kulawo masimi ngamayeza okubulala ukhula e-dicamba enziwe iinkampani ezintathu. Izityalo ziyayinyamezela i-dicamba ngelixa ukhula lusifa.
Amaqela okuphembelela amafama athi kwisishwankathelo sabo ukuba izigidi ezingama-64 zeehektare zatyalwa ngembewu eyonyamezelayo dicamba ngeli xesha lonyaka. Bathe ukuba abo balimi abanakho ukutshiza amasimi abo ngeemveliso ze-dicamba baya kuba "bengazikhuselanga kukhula olumelana neminye imichiza yokubulala ukhula, ebangela
ezinokubakho iziphumo ezinokubakho kwimali ngenxa yelahleko yemveliso. ”
Xa iMonsanto, i-BASF kunye ne-DuPont / Corteva bakhupha i-dicamba herbicides kwiminyaka embalwa edlulileyo babanga ukuba iimveliso azizukuhamba zize ziye kumhlaba oselumelwaneni njengoko iinguqulelo ezindala zemveliso yokubulala ukhula lwe-dicamba zaziwa ukuba ziyazenza. Kodwa ezo ziqinisekiso zibonakalise zibubuxoki phakathi kwezikhalazo ezixhaphakileyo zomonakalo we-dicamba drift.
Ngaphezulu kwesigidi esinye seehektare zezityalo ezingezonjineli zemfuza ukunyamezela i-dicamba kwathiwa zonakalisiwe kunyaka ophelileyo kwi-18, inkundla yomanyano yathi kwisigqibo sayo.
“Injongo ye-EPA kukukhusela impilo yoluntu kunye nokusingqongileyo…” utshilo uMongameli webhodi yeSizwe yoMbutho weFama yeeFama uJim Goodman. "Ukuwudelela kwabo lo msebenzi bekungachazeki ngokucacileyo kunokungasihoyi kwabo isigwebo seNkundla yesithoba yeSibheno seZibheno sokumisa izicelo eziphezulu ze-dicamba ngokukhawuleza ukuthintela izigidi zeehektare zezityalo zamafama ukuba zingatshatyalaliswa."
NgoFebruwari, a Ijaji yaseMissouri iyalele I-Bayer kunye ne-BASF ukuhlawula umfama wepesika i-15 yezigidi zeedola kumonakalo wembuyekezo kunye ne-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo womonakalo we-dicamba kwizitiya zomlimi. Ijaji yagqiba ukuba iMonsanto kunye ne-BASF baceba ukwenza izinto ababesazi ukuba ziya kukhokelela ekonakaleni kwezityalo kuba babelindele ukuba iyonyusa inzuzo yabo
I-Monsanto Roundup Trial Tracker, Akohlulwanga Isekethe yesi-9, I-BASF, Bayer, Isiko soBume beeMvelo, Iziko loKhuseleko loKutya, Corteva, umqhaphu, inkundla, Dicamba, dupont, Engenia, EPA, kwifama, Fexapan, ukutya, glyphosate, impilo, herbicides, IMonsanto, inzululwazi, zesoya, ababulali bokhula, ukhula, Xtend